Itoophiyyumaan Waalluu Nafxanyaan Haguugatee Deemu |
Itoophiyyumaan Waalluu Nafxanyaan Haguugatee Deemu.
Damee Boruu: 10/30/2020
Rakkinni guddaan an qabu of tuulummaa Nafxanyaa fi Amhaara adda baasee hubachuu dhabuu koo ti. Akka hubannaa koo yoo tahe Uummatni Amhaaraa akkuma uummata Impaayeera Itoophiyaa keessa jiraatu maraa beelaa, dhukkuba fi hiyuma himamee hin dhumneen waxalamaa jiraata. Waan mootummaan maqaa Amhaaran Impaayeera Itoophiyaa bitaa ture akka sabaatti qofatti isaaniif faayidaan argame tokko hin jiru. Afaan Amhaaraa Afaan biyyaa sana tahun Uummata Amhaaraa bal’aaf bu’aa fideef of “tuullummaa ni moona” irra kan hafe natti hin mul’atu.
Impaayyeerri Itoopiyyaa wagga dhiba tokko ol biyya yaroo bitaa ture sana utuu Naannoo Amaaraaf karaa wal quunnamitii baaheef, mana barumsaa ijaarameef, bishaan dhugaatii galeef, hospitaala itti tajaajilamu dhaabbateef jiraatee Uummatni Amharaa mootummaa isaanii dhufaa darbaan utubee eeguu qaba. Dhugaa jiru kana utuu arguu maaliif Uummatni Amhaara warri maqaa isaan daldalu kana naaf yaadee lalabaa jira jedhee akka fudhatu naaf hin galu. Erga yoom as Nafxanyoon Uummata Amhaaraaf kan dhaabbatanii beekan.
Ilmaan Nafxanyoota akkuma abbootii isaanii warra garaa isaanii guutachuuf umurii isaanii guutuu fiigu malee biyya Itoophiyaa jedhanii faarsaniis tahe naannoo Amhaaraa guddisuu irratti waan ija nama itti mul’atu tokko hojjetanii hin beekan. Waan baayyee beekan guddaan waakkachuu fi kadhachuu dha. Waan argame immoo of saammachuu qofa. Bara baraan tooftaa isaanii isa otontoraa yaroon itti darbe” harmee Itoophiyaa akkuma kana duraa sodaatamtee fi badhaatee bara baraan jiraata” jedhanii uummata burjaajersuu yaadu.
Bara Haayile Silaasee amma har’a umurii koo dheera kana keessatti yaroo itti biyyi Itoophiyaa jedhamtu badhaatee “ganana” taatee uummatni nagaa argatee gammadee bahee galu takkaa hin agarre. Uummatni Itoophiyaa bara baraan kan beelaan dhumu, kan biyya lafaa kana irratti baqattumaan beekamu, biyya keessatti kan dhalli namaa akka bineesaa addamsamee gooda keessatti ajjeefamee bineensi nyaatuu argaa as geenye. Dhallonni har’a jirus kanuma argaa jira. “Ganaanaa fi badhaatuun Itoophiyaa” isaan jedhani bakka namni jiraatee arguu hin dandeenye “Janata” keessa yoo jirti tahe malee lafa kana irra hin jirtu.
Bara EPRDF namni Prof. Asrat W/Yesus jedhamu tokko“ Yemelaw Amhaara “ ijaarsa jedhu yaroo dhaabbate biyyaa Impaayera Itoophiyaa keesatti wal hubanan waan argamu natti fakkaatee ture. Maaliif yoo jenne Uummatni Amhaaraas akkuma uummata Impaayera Itoophiyaa biraa ijaarsa haqa isaa falmuu qabaachuun wal hubatanii nagaan waliin jiraachuuf yoo hin danda’amne immoo gargar bahuuf barbaachisa dha jedheen yaada. Amhaarri Itoophiyaa dha malee waan biraa tahuu hin danda’u warri jedhu ni kijiba. Sabni Ahaaraa akkuma Oromoo, Tigray, Somalee, Afarii warra hafanii hundaa dura Amhara. Biyyaa Itoophiyaa jedhamtu immoo saba hundaa wajjin waloon qaba. Yoo biyya waloon qabu kana kan koo qofa kan jedhuu yoo tahe isatu qofaa hafa malee biyyicha qofaa dhunfachuu hin danda’u. Haqa kana uummatni Amhaaraa illee waan hubatu natti fakkaata.
Warri isa irraa fagoo taa’aan eenyummaa isaa itti himan firoota isaa akka hin taanees hubachuu qaba. Uummatni Amhaaraa daldalootan siyaasan fugisoo isa oofamaa jiran baayyee qaba. Dhaaba uummata Amhaaraa keessa dhalatee, rakkin isaa, fedhii fi hawwii uummaticha adda baasee hubatee isaaf qabsaa’u horachuu isa barbaachisa. Dhiyeenya as dhaabbni Sochii Uummata Amhaaraa(Amhara National Movement) jedhu tokko maqaa Uummata Amhaaraan socho’uu jalqabee jira. Warrii kun dhaaba ilmaan nafxanyoota irraa adda tahu jedhee yaadaan ture. Maqaa ijaarsa Amhara mogaafachuu malee nafxanyootaa caalaa Itoophiyaawiin warra kana tahanii argaman. Haaduu qara lama. Warra kana wajjin wal hubannee biyya Itoophiyaa jedhamtu keessa gonkumaa waliin jiraachuun akka hin danda’amne garaa kutannee dhiisuu malee filmaata biraa hin qabnu.
Dhaabbonni nafxanyoota kan sochii uummata Amhaara ofiin jedhu kana dabalatee kan jiraatanii fi qabsaa’an Oromiyaa keessatti. Uummata isaanii keessa jiraatanii rakkinaa fi bal’ina isaa hin hubatan. Waan uummatni isaanii fedhuu fi hawwu tasa hin beekan. Waan ofiif barbaadan garuu bareechanii beeku. Uummata Oromoo wajjin qabsoo gochuu isaan hin barbaachisu ture. Uummatni Oromoo haqa isaa takkuu tokko illee akka isaaniif kennaa hin jirre har’a illee waan hubatan natti hin fakkaatu. Guyyaan Uummatni Oromoo hunda isaanii of keessa haxxa’ee baasu fagoo hin jiru. Biyya Oromoo keessa jiraatanii lafa Oromoo falmachuu irraa naannoo isaanii deemanii uummata isaanii ijaaranii wajjin qabsaa’uun qajeelaa dha. Uummata isaanii wajjin qabsaa’uu waan dhiisaniif hudduu Konoonel Abiyi jala yoo fiigan aangoon waan isaaniif qicamu itti fakkaata. Garuu Konoonel Abiyi jiraachuu isaaniif wabii tahuun hafee ofii isaafuu wabii jiraachuu hin qabu.
Waan biraa yoo hafe waggaa lamaan darbe kana waan TPLF keessa jirtu argu. Warri TPLF lolanii Dargii injifatanii gara aangoo dhufuu isaanii caalaa waan waggaa lamaan kana keessa hojjetan jabbina isaani ifa godha. Uummatni Oromoo olaantummaa isaanii fudhachuu akka dide yaroo argan uummata isaanii itti baqatanii galanii of ijaaranii, filmaata godhanii Mootummaa Uummata Tigray dhaabbatan. Kana booda humni TPLF cabsuuf yaaduu waan hundaa dura keessa ofii bareechee hubachuu qaba.
Ijaarsi TPLF bara aangoo qabu waggaa 27 keessatti naannoo Tigray guddisuuf hedduu hojjete jira jedhama. Oduu malee waan hojjetame waan ijaan hin aggarreef himuun isaa na rakkisa. Akkaataa itti filmaata isaanii raawwatanii Mootummaa Uummata Tigrayi ijaaratan yoo ilaallu baayyee akka qophii qaban agarsiisa. Kana malee naannoon tasgabbii qabuu fi bakka uummatni namni nagaan bahee galuu naannoo Tigray qofa akka tahe wal nama hin gaafachiisu.
Ijaarsi Sochii Uummata Amhaaraa (ABIN) Mootummaan Konoonel Abiyi yaroo filmaata dabarsuu nan deegara jechaa ture. Kaleessa immoo hiriira nagaa Naannoo Amhaaraa keessatti waamuun waan yadatamu. Finfinnee taa’anii Naannoo Amhaaraa keessatti hiriira waamuun itti gaaftama of walaaluu dha. Hoogganni ijaarsa kana uummaticha wajjin hidhamuu fi ajjeefamuu qophii hin qabu. Garuu maqaa isaan aangoo qircachuu kufee ka’aa jira. Bara mootummaan isaanii aangoo qabu deemanii lafa uummata biraa saamaa akka turan kan seenan mirkaneessu. Erga Sirni Abbaa Lafaa bade booda garuu uummata keessa qubatanii jiran wajjin nagaan jiraachaa jiru. Ijaarsonni nafxanyootaa fi manni ammantaa isaanii bu’aa siyaasaa irraa argachuuf jecha Uummata Amhaaraa biyya Impaayeeraa Itoophiyaa keessa faca’ee nagaan jiraacha jiru hidhachiisanii uummata keessa jiraatu wajjin walitti buusaa jiru. Cubbuu isaan dalgaa jiraniin Uummatni Amhaaraa naannoo hundaa keesatti nagaa dhabaa jira.
Oromiyaa keessatii kan ilmaan Oromoo fixxaa jiru ilmaan nafxanyootaa akka tahe Uummatni Oromoo bareechee beeka. Akkuma kana naannoo Sidaamaa, Walaayitaa, Kafichoo, Benshangul, Sabaa fi sab-lammii hafan keessatti kan nagaa nama dhowwachaa jiru ilmaan nafxanyoota Mootummaa Abiyiin degaramatu kana akka tahe hunduu ni hubata. Namoonni dhalootan Amhaaraa tahan kaayyoo warra ilmaan nafxanyoota kana hordofuu dhiisanii uummata keessa jiraatan wajjin walii galanii nagaan jiraachuun filmaata hin qabu. Gaafa nama dhalootan Amhaaraa tahee naannoo adda adda jiraatu irra balaan gahuu ilmaan nafxanyoota Finfinnee fi Washington D. C. taa’anii booyicha walii labsuu fi iyyuu malee uummata isa akka gaaga’amu saaxilaa jiran waan gargaaran hin qaban.
Previous articleQabsoon Qeerroo Bilisummaa Oromoo ABO jalatti qindaayee Oromiyaa fi lammiilee Oromiyaa walaba baasuudha.
Next articleOromo Activists Support Letter from U.S. Senate to Secretary Pompeo calling for U.S Action in Ethiopia